Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Leandro Trossard Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Anyị Leandro Trossard Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị Nne na Nna, Ezinụlọ, Nwunye (Laura Hilven), Cargbọ ala, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
Na nkenke, anyị na-enye gị ezi akụkọ ihe mere eme nke a Onye Belgium na-agba ọsọ nke sitere na Genk. Akụkọ anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ nwetara ihe ịga nke ọma na football. Ugbu a iji mee ka agụụ ịgụ gbasara onwe gị na-agụ na Leandro Trossard's Bio, lee mgbe ọ bụ nwata ka ọ na-eto eto.
Ihe omuma banyere Leandro Trossard - Site na nwata ya rue mgbe o mechara nwee ihe ịga nke ọma.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nwere ọgụ mwakpo na ọgụ na ọgụ dị ka Eden Hazard. Dika ozo, obu otu n'ime ihe ndi mara mma Festival. N'agbanyeghị otuto ndị a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụchara akwụkwọ akụkọ ndụ Leandro Trossard. Enweghị oge ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Leandro Trossard Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha T Le. A mụrụ Leandro Trossard na 4thbọchị 1994th nke Disemba XNUMX nne ya, Linda Scheepers na nna, Peter Trossard, na obodo Genk, Belgium.
Dabere na nchọpụta, ndị na-agba ọsọ bọọlụ Belgium bụ nwa mbụ n'ime ụmụaka abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya. Anyị achọghị ihe akaebe… Leandro weghaara nna ya, Peter Trossard. Ọzọkwa, ịmara, nne mama bọọlụ, Linda Scheepers, debere aha ezinụlọ ya mgbe ya na Peter jikọrọ eriri ahụ.
Zute nne na nna Leandro Trossard - Linda Scheepers na Peter Trossard.
Na-etolite na Belgium:
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Leandro bụ ụdị nwatakịrị a na-atụgharị uche, bụ onye na-arụsi ọrụ ike mgbe niile na bọl bọl. Dị ka akaụntụ Instagram si tinye ya, onye Belgium toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke nta na Lanklaar, obere obodo dị na Belgium. N'okpuru ebe a, ụmụnne ha abụọ yiri onwe ha nwere ncheta obi ụtọ banyere oge ha bụ ụmụaka.
Nwanne nwanyị Leandro Trossard. Siblingsmụnne abụọ nwere ezigbo ncheta oge ha bụ nwata.
Onye uwe ojii nọrọ oge nwata ya gburugburu obodo Dilsen-Stokkem nke Belgium - nke dị naanị nkeji iri na ise site na Luminus Arena ebe anyị nwere ama egwuregwu dị iche iche nke Genk. Mpaghara a, Maasland adịghị na Genk City.
Leandro Trossard Ezigbo Ezinụlọ:
Linda Scheeper, nne ya rụrụ obere cafe na Lanklaar, Belgium. Ọ rere ndị ahịa ya obere ihe ọ drinksụ andụ na ihe ọ drinksụ drinksụ maka ndị ahịa ya, ndị ọkachasị ndị hụrụ Leandro n'anya. Di ya, Peter Trossard, so n'òtù ndị ọrụ Belgium. Ha abụọ nne na nna Leandro Trossard rụrụ ọrụ n'ụlọ obibi ụlọ akwụkwọ, nwee ezigbo agụmakwụkwọ na-enweghị ego ma ghara ịlụ ọgụ.
Leandro Trossard Ezinụlọ:
Onye Belgium ndị na agba bọọlụ bụ nwa afọ nke Lanklaar, obodo na obodo dị na mpaghara Belburg nke Limburg dị nso na Hasselt. N'okpuru ebe a, obodo a dị jụụ na ụmụ amaala na-arụsi ọrụ ike dị nso na mpaghara South Netherlands.
Leandro Trossard ezinụlọ. O si n’obodo dị udo dị na Belgium.
Site n'echiche agbụrụ, Leandro Trossard bụ onye agbụrụ Flanders nke Belgium. Ndị a nọ n’otu asụsụ a nọ na mpaghara Flemish nke Belgium. Ha na-asụ karịa Dutch karịa French. Kpakpando dị ka Nsogbu Thorgan si n'akụkụ Belgium nke na-asụ French na-esite na Belgium.
Leandro Trossard Mmụta:
Dị ka ọtụtụ ụmụaka si Lanklaar, nwa na-ahụ n'anya bọọlụ gbasoro ụlọ akwụkwọ mmanye dị ka obodo ya kwere. N'oge ụfọdụ, Leandro leghaara nghọta nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị anya karịa itinye akụkụ ọ bụla nke mgbalị ya na pitch. Nchọpụta nwere na onye ọkpụkpọ bọọlụ gara Sint-Jan Berchmanscollege, ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Obodo Brussels, Belgium.
Dika nwatakiri aru, ima ya n’egwuregwu football mere ka o buru onye ogwu nke na-acho mgbe nile ile egwu egwuregwu bọọlụ. N'ihi nke a, Peter na Linda kpọgara ya ebe niile ka ha lee egwuregwu bọọlụ ka ha nwere ike iru.
Mgbe ọ na-agba bọl na mpaghara Krekeldries nke Lanklaar, Leandro na ndị enyi ya nwere nkwekọrịta. Ha kwetara ịlụ ọgụ siri ike, na-ekwe onwe ha nkwa na ọ dịkarịa ala otu n'ime ha ga-emerịrị ya. N'etiti ndị omempụ, Leandro - nke pere mpe - nwere nnukwu ọchịchọ. Ọ nọrọ ọtụtụ awa n'ịtụgharị nkà ya karịa karịa ndị ọzọ - n'okporo ámá ebe ọ tolitere.
Ọbụna mgbe ezinụlọ ya kwagara Dilsen-Stokkem, nwatakịrị ahụ laghachiri igwu egwuregwu bọl na otu ndị enyi nwata ọ nwere nkwekọrịta. Ka oge na-aga, ụmụ nwoke niile kwagara na ọdịnihu ha.
Leandro Trossard Football Akụkọ:
Ọ bụ ezie na ọ bụ ezigbo Genkie kemgbe ọ bụ nwata, ihe kachasị Leandro Trossard mkpa bụ igwu egwu na klọb ndị Belgium. N'adịghị ka mbipụta banyere akụkọ ọrụ ya na Wikipedia, nwatakịrị ahụ akwụsịghị na KRC Genk ruo mgbe ọ dị afọ iri na isii.
Leandro Trossard malitere ọrụ ya site na igwu egwuregwu bọọlụ ole na ole. N'ịhapụ ọrụ ya, Peter na Linda (ndị mụrụ ya) kpọgara ya Louis J. Mercierlaan, ebe ubi ntorobịa Patro dị. Mgbe Leandro dị afọ iri na abụọ, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ na-adịgide adịgide na Patro (obere obere ụlọ Belgian) ebe ọ nwetara ụfọdụ oge dị mma.
Na iri na ise, Trossard kwagara FC Bocholt, obere klọb n'obodo Bocholt, obodo dị na mpaghara Belgium nke Limburg. Ihe kpatara njem a bụ n'ihi na Patro batara na nsogbu nke mere ka ha laghachi na ngalaba nke anọ nke Belgium.
Bocholt bụ nzọụkwụ dị elu na ọrụ ntorobịa Leandro Trossard. Nwatakịrị na-eto ngwa ngwa na-egwuri egwu maka ụlọ ọgbakọ North Rhine-Westphalia dị ka onye na-eti ihe. N’oge ahụ, ọ ulatedomiri Didier Drogba dị ka onye nlereanya ya. Ọụ nke ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya, a kpọrọ ya na ndị ntorobịa mba Belgium. Nke a mere mgbe o meriri ihe mgbaru ọsọ 42 maka klọb na oge abụọ.
Leandro Trossard Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Naanị mgbe ọ nwetara oku mba, ndị otu egwuregwu bọọlụ nke mbụ bidoro igosi mmasị na ndị na-agba bọl. KRC Genk na Standard bụ nhọrọ Leandro, mana nke mbụ mechara bụrụ nhọrọ kacha mma maka ya.
Onye na-eto eto wakporo na KRC Genk na iri na isi. N'ịbụ onye na-eto eto n'oge ahụ nke na-enweghị ahụmịhe, a gwara Leandro ka ọ gaa mgbazinye ego na Lommel SK, klọb ọzọ dabere na obodo Lommel, Limburg.
Trossard bịara bụrụ onye ama ama na mbinye ego ya na ndị Belgian First Division B. Ọ nwalekwara onwe ya (ka ọ gbaziri ego) ya na ndị otu ndị ọzọ, ya bụ; ya na KVC Westerlo na Oud-Heverlee Leuven. Site na ihe mgbaru ọsọ 34 dị ka onye ọkpụkpọ ego, onye na-eto eto nwetara ikike ịlaghachi na klọb nne na nna ya (Genk) - n'oge a, dịka onye ama ama.
Onye Belgium meriri ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ n'oge mgbazinye ego ya.
Leandro Trossard Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Na-egosi na ihe ịga nke ọma nke ịgbazinye ego ya abụghị ihe ọ bụla maka ọdịmma maka kpakpando na-eto ngwa ngwa. O nwere mmetụta dị ngwa na Genk, ọbụnakwa na-ebili ịghọ onye isi oche nke klọb. Dị ka onye ọkpụkpọ ha kachasị mkpa, Leandro Trossard duziri Genk gaa n'elu tebụl egwuregwu na Belgium - na-enyere klọb aka ịmepụta ọtụtụ oge dị mkpa.
Ọ na-egosipụta ezi akara nke onye ndu.
N'oge ahụ, ebe ọ malitere ịgbaso nzọụkwụ nke Kevin De Bruyne, Leandro amaghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ịkọbara trophies na CV ya. Imeri ndi otu ndi Belgian First Division mere ka ndi mmadu mara aha ya obughi nani onye ndu kama obu otu n'ime uzo kachasi nma nke mba a.
Ozugbo mmeri ahụ gasịrị, aha ya na-eto eto ghọrọ ebe nkiri nke gburugburu Europe. Na ọtụtụ ndị nwere mmasị, Leandro Trossard enweghị ụkọ nhọrọ dị elu. N'ụbọchị 26th nke June 2019, Brighton kwetara ịbanye ya na nkwekọrịta afọ anọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Leandro Trossard Lifehụnanya Ndụ na Laura Hilven:
Onye Belgian Footballer nwere nwunye mara mma, afọ abụọ tọọ ya. Mana onye chọrọ!… Afọ bụ nanị ole na ole. Ndị enyi abụọ ahụ nwere ọmarịcha ụbọchị ịlụ di na nwunye tupu Leandro agbaa ajụjụ - nke ọ kwuru EE!
Zute nwunye Leandro Trossard- Laura Hilven.
Mgbe ọ nakweere nkwenye agbamakwụkwọ ya, Laura Hilven gwara ndị na-eso ụzọ Instagram ya na ya enweghị ike iche na ya na onye ọ bụla ọzọ karịa Leandro. Otu afọ mgbe e mesịrị, nnukwu ụbọchị mechara rute maka lovebirds abụọ ahụ.
Kpamkpam na elekere 11 nke ụtụtụ - n’ụbọchị ukwu, Laura Hilven na di ya tinyere mgbaaka agbamakwụkwọ ha na mkpịsị aka ha. Ebe agbamakwụkwọ ha dị na nnukwu ọnụ ụlọ obodo nke Opglabbeek (Oudsbergen), ebe di na nwunye Genk biri tupu ya emechaa nyefe ya na Brighton.
Leandro Trossard foto agbamakwụkwọ.
Dika emeputara, agbam akwukwo Laura Hilven na Leandro bu ihe di nma nye ulo ochie ya (KRC Genk), ebe onye isi agha ekwenyela iso Brighton.
Ọ dị mkpa ịsị na mgbe ha ka bụ enyi nwoke na enyi nwanyị, Leandro na Laura kwetara ime ka ndụ ha nwee isi. Ha chere na ha ga-amụ nwa ga-eme ka ha ghara ịnọnyere ha. Ọnwa itoolu ka e mesịrị (na 2017), a mụrụ Thiago Trossard - ndị na - agba ọsọ n'ọdịnihu. Maka Leandro, ịbụ nna abụrụla nke bụ isi iyi nke mkpalite, mpako na mmezu.
N'ụbọchị a, a mụrụ onye na-agba ọsọ n'ọdịnihu - Thiago Trossard.
Laura na Leandro maara nke ọma na itinye ndụmọdụ ndụmọdụ nne na nna dị jụụ iji hụ ka nwa ha (Thiago) nwere ndụ kachasị mma. Ka m na-ede ihe ndekọ a, ezinụlọ nke mmadụ atọ na-ebi obi ụtọ na ndịda ụsọ oké osimiri England - Obodo Brighton.
Ndụ obi ụtọ na South England.
Gịnị bụ Thiago Trossard's Future:
Enwere ohere dị elu, nne na nna nwata ahụ ga-achọ ka ọ bụrụ ndị na-agba ama. Mana ihe mbụ, ọ dị mkpa ịzụlite nchekwa nchekwa mmiri na ịlanarị. Anyị nwere ike ịhụ Thiago Trossard, onye nwekwara mmasị Rugby, na-ewere nzọụkwụ mbụ ya maka ọdịnihu egwuregwu ya.
Thiago na-ebute nzọụkwụ mbụ n'ọdịnihu.
Leandro Trossard Ndụ Nke Onwe:
Ndị na-agba ọsọ na Belgium nwere àgwà nke akara Sagittarius Zodiac. Na-amalite, anyị niile maara Leandro bụ onye nwere mmụọ siri ike. Nwa amaala Lanklaar nwere ike ịgbanwe echiche ya ka ọ bụrụ omume doro anya nke na -emepụta ngwa ngwa.
Anyị nwere ikpe doro anya nke àgwà Sagittarius onye winger. You maara? 2020 Na XNUMX, Leandro Trossard wuru Lego Taj Mahal dị ka ụzọ isi emeso owu ọmụma bọọlụ n'oge mkpọchi COVID-19. Onye Belgium mere nke ahụ mgbe ọ nọ n'ụlọ ezinaụlọ ya na Genk. O tinyere awa ole na ole kwa ụbọchị iji chịkọta ihe niile dị 5,923 iji wuo otu n'ime ihe ịtụnanya ụwa.
Leandro Trossard Ndụ Nke Onwe kọwara. Iwuli Lego Taj Mahal na-egosi mmebi nke omume Sagittarius ya.
N'ikpeazụ, na mkparịta ụka banyere mmadụ, otu ihe nzuzo nke onye ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma bụ eziokwu ha anaghị echezọ ebe ha si bịa. Nke a bụ ihe gbasara Brighton winger onye na-eleta n'okporo ámá nwata nke Lanklaar ebe ọ na-egwu bọọlụ mbụ ya.
Ndị na-agba ọsọ nwere obi umeala echefughị ​​mmalite ya.
Ndụ Leandro Trossard:
Dị ka anyị si mara, ndị ịgba bọọlụ hụrụ n'anya na-etinye ego na oke osimiri na ezumike na-abụghị nke oké osimiri. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Leandro na-ekpori ndụ n’ụzọ ọtụtụ ndị egwuregwu bọl a ma ama na-eme. Otu ihe kpatara ezumike ahụ bụ iji zụlite mmekọrịta dị mma na nwunye ya ugbu a, Laura Hilven.
Ebe ndị dị n'akụkụ osimiri na ebe ndị ọzọ mara mma na-agbakwunye ume ike nke ndụ Laura na Leandro.
Gbọ Leandro Trossard - Gịnị ka onye Belgium na-anya?
Ọ bụ onye ọrụ gọọmentị, nwa afọ Lanklaar na-etinye ego ya iji nweta ihe onwunwe, dịka ụgbọ ala ya kachasị amasị ya. Dị ka a hụrụ n'okpuru, Leandro nwere ọdịdị pụrụ iche maka ụgbọala ojii. Ọ na-enwekarị mmasị n'ụdị ụgbọ ala a - ụdị ọ na-anya kemgbe ọ dị afọ iri na ụma.
Nke a bụ Leandro Trossard's Car. Onye Belgium ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na ika a.
Leandro Trossard Ndụ Ezinụlọ:
Ọ bụrụ na mmadụ na-arapara n'akụkụ gị n'oge niile ị na-akwadebe ma ọ bụ na-enweghị ihe ị bụ, ha kwesịrị ịnọnyere gị oge ịga nke ọma. N'akụkụ a, anyị ga-agbagha eziokwu banyere nne na nna Leandro Trossard, ụmụnne ya na ndị ikwu ya - ndị mmadụ mere ka ọ nwee mmetụta na ọ hụrụ n'anya nke ukwuu na ụbọchị ọmụmụ ya.
Nna Leandro Trossard:
Peter bu ihe ngosi nke nlekọta Chineke na ndu nke nwa ya nwoke. Ọ bụ nwoke onye ọkpụkpọ Belgium na-ele anya, n'agbanyeghị etu o si nwee ọganihu ma ọ bụ ogologo. Dị ka ọ dị na 2021, nnukwu nna ahụ bụ nanị otu afọ site n'ịkụ jubilii ọlaedo nke ndụ (50 afọ).
Peter Trossard na-akpọrọ nwa ya nwoke gaa ebe niile. Nna dị mpako na-ebi ndụ kachasị mma nke ndụ ya.
Ná mmalite, Peter Trossard hụrụ mkpa ọ dị itinye ndụ ya ka ọ ghara iji 100% lelee ọrụ Leandro anya. Nna na nwa nwoke agabigala oke na mkpa ma site n'enyemaka nke onye na-ere ahịa, (onye bụ Josy Comhair), na-achịkwa ọrụ nwa ya nwoke ka ọ dị mfe.
Leandro Trossard nne:
Anyị na-ezo aka na Linda Scheepers, dịka ọkpụkpụ nke ezi na ụlọ. N'ime obodo Dilsen-Stokkem (Lanklaar) ebe Leandro toro, nne ya (onye ama ama ama) achọghị mmeghe. Leandro Trossard's Mother na-agba ọsọ azụmaahịa Pub na-aga nke ọma na mpaghara Lanklaar.
N'ihi na nwa ya nwoke na-ewu ewu, ndị ahịa na-asọpụrụ ya na-atọkarị ya ụtọ ikiri egwuregwu Brighton na azụmahịa ya. Dị ka a hụrụ na vidiyo agbakwunyere, Linda Scheepers bụ onye na-enye onye nta akụkọ egwuregwu ogwe aka emeghe ọbụna n'oge awa azụmahịa. Lee, otu n'ime oge ndị ahụ.
Andromụnne Leandro Trossard:
Site na ihe o yiri, onye Belgium enweghị nwanne nwoke ma nwanne nwanyị nke o kpugheere ndị mgbasa ozi mgbasa ozi ya. Na-eso ọpụpụ nwanne ya nwoke na Lommel United site na mgbazinye ego na 2013, anyị anụbeghị ihe ọ bụla gbasara nwanne nwanne Trossard. Nwanne nwanne nwoke nke nwanne nwanyị nke Leandro bi naanị onwe ya, ma ọ dịkarịa ala ugbu a.
Ndị ikwu Leandro Trossard:
Onye uwe ojii Brighton nwere njikọ chiri anya na nne na nna nke Laura Hilven, nwunye ya. Nwunye nwunye Leandro Trossard (karịchaa) na-egosi na ọ bụ nnukwu onye na-akwado di nwa ya nwanyị. Fabienne Hilven agbasaghị mgba KRC Genk ọkụ na ememme ememme trophy. Mgbe Leandro na nwunye ya bịara, nne nne ahụ na-akwado nwa nwa ya (Thiago) mgbe niile n'akụkụ ya. Dị ka Linda, Fabienne nyekwara ajụjụ ọnụ.
N'ikwu okwu banyere onye nwere ike ịbụ onye ikwu, aha Dylano Trossard na-apụtakarị na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ na-enye anyị ihe ngosi na ọ nwere ike ịbụ obere nwanne nwanne nke ndị ịgba ọsọ.
Leandro Trossard Eziokwu:
Ebe anyị gara njem akụkọ ndụ nke onye na-alụ ọgụ, anyị chere na ọ dị mkpa ịgwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị gaa n'ihu.
Eziokwu # 1 - Leandro Trossard na egbe:
Kpakpando Brighton nwere ume na ume ibu ezigbo onye égbè. N'ebe a, anyị na-ahụ ya ka ọ na-agbanwe akwara ubu ya na ihe anyị maara dị ka otu n'ime ihe omume ntụrụndụ zoro ezo.
Ihe omume zoro ezo nke Leandro Trossard - Lovehụnanya maka agbapụ.
Eziokwu # 2 - Inweta mmanya na-egbu:
Leandro ama anam idemesie okụt ke idiọk. O mere n'abalị heụbigara mmanya ókè. Onyeisi ndị Genk kwuru ụfọdụ ihe ọjọọ n'oge ememme aha. Na vidiyo dị n'okpuru, onye mmanya na-egbu Trossard kparịrị site n'ịbụ abụ "Ndị ọrụ ubi niile bụ nwoke nwere mmasị nwoke". O mere nke a maka ndị na-akwado Club Brugge (onye na-asọpụrụ onye Belgium).
Mgbe emechara oriri na nkwari ahụ, mgbaghara mgbaghara Trossard zara ihe ahụ mere n'ihu igwefoto TV Limburg. N'okwu ya;
“N'ABAL THAT ahụ, abụ m mmanya na-aba n'anya. Achọghị m ịta ndị mmadụ ahụhụ. MGBE OBI JI. ”
Eziokwu # 3 - Akaebe Gas na-achị ọchị:
Onye winger, na esemokwu ọzọ, pụtara na vidiyo na-eme ihe bọọlụ gbochiri. Leandro nọdụrụ na tebụl n'akụkụ Jahanbakhsh, Duffy et al - n'ime ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ ịgba egwu abalị, nke ihe ọ drinksụ drinksụ gbara ya gburugburu na n'ezie, ọkpọkọ Shisha. Balloons a hụrụ na vidiyo (n'okpuru) bụ ihe a ma ama n'etiti ndị na-ekuru ikuku nitrous, AKA na-achị ọchị gas.
Dị ka akwụkwọ akụkọ mpaghara si kwuo Argus, Brighton maara banyere vidiyo ahụ ebe ọ bụ na emeela okwu ahụ n'ime.
Eziokwu # 4 - Leandro Trossard rygwọ na Net Worth:
BRIGHTON ụgwọ ọnwa
Kwa Afọ: £ 1,822,800
Ọnwa kwa: £ 151,900
Kwa Izu £ 35,000
Kwa .bọchị £ 5,000
Kwa elekere £ 208
Kwa nke abụọ £ 0.06
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Leandro Trossard'S Bio, ọ kpatara nke a na Brighton.
Nwa amaala Belgium nke na-akpata, 61,357 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ 39 na ọnwa itoolu iji nweta ihe Leandro Trossard na Brighton na-enweta kwa afọ.
Leandro Trossard Net thtọ:
Bụ onye isi ọkpụkpọ ebe ọ bụ na 2012 na-egosi na ọ nweela nnukwu akụ na ụba n'okpuru onye na - elekọta ya - JC Player management Sports (nke Josy Comhair nwere). Rossgwọ Trossard, azụmahịa na ndị na-akwado ya nwetara afọ ole na ole ahụla ka ọnụ ahịa ọnụọgụ ya ruru ihe ruru nde euro 4 dịka mmalite nke 2021.
Eziokwu # 5 - Ihe ndekọ osisi:
You maara?… Leandro Trossard bụ onye egwuregwu bọọlụ mbụ kemgbe Cristiano Ronaldo iji mee nkụ ahụ ugboro atọ na otu egwuregwu Premier League. Site n'ime nke ahụ, ọ na - ejide ndekọ ahụ dịka onye ọkpụkpọ na - enweghị ihe jikọrọ ya na egwuri egwu na egwuregwu EPL.
Eziokwu # 6 - FIFA stats:
Baller kwesịrị inwe ihe karịrị 80 isi n'ihi na, na mmalite nke 2021, anyị hụrụ ya dị ka otu n'ime ndị kasị mma na EPL na dribbling na njikwa bọl. Leandro na Divock Origi nwere nsogbu FIFA 2021 dị ala nke ihe 77, nke ọtụtụ ndị fan bụ egwuregwu zuru oke.
Lee ikpe na-ezighị ezi gbajiri na Leandro.
Eziokwu # 7 - Leandro Trossard Okpukpe:
Okpukpe ndị bụ isi na Belgium bụ Iso Christianityzọ Kraịst, (karịsịa Roman Katọlik). Ndi Katoliki buru 58% nke ndi bi na obodo a. Leandro bụ onye Kraịst lụrụ Laura Hilven n'ụzọ okpukpe kwere. Ọ bụ ụdị nke anaghị eme ka omume ya pụta n'ihu ọha.
Mana kama ịla n'iyi dị ka ọtụtụ ndị egwuregwu si mba ọzọ enwetala, onye Belgium ahụ si n'ike gaa n'ike na Premier League nke England. Ihe omuma banyere Leandro Trossard na - akuziri anyi na - obu oke mmadu n’eme ka ogha n’iru. N'ime ndị enyi ya na ha gbara ndụ (n'oge ọ bụ nwata), Leandro nwere ikike dị ukwuu.
Ọ dị mkpa ịkwado ndị nne na nna na-agba ọsọ ụkwụ (Linda Scheepers na Peter Trossard) maka ịbụ ọkpụkpụ ya. Cheta na papa ya jigidere ọrụ ya ka ọ lekọta ya anya ma mama ya na-eji ụlọ mmanya ya eme ihe nwa ya nwoke.
Ndị otu anyị gbalịsiri ike izi ezi na izi ezi mgbe ha na-ewepụta akụkọ banyere Leandro Trossard's Bio. Jiri nwayọ rute anyị ma ọ bụrụ na ị chọpụta ihe na-adịghị ele anya na ihe anyị na-ede banyere winger. Ma ọ bụghị ya, ka anyị mara na ngalaba nkọwa, echiche gị na Leandro. Iji nweta ngwa ngwa nke ihe ncheta ya, jiri okpokoro wiki a.
Aha n'uju: Leandro Trossard
aha otutu: Le Tross
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 4 nke December 1994.
Age: 26 afọ na ọnwa 7.
Ndị nne na nna: Peter Trossard (Nna) na Linda Scheepers (Nne)
Nwunye: Laura Hilven
Ndị ikwu: Fabienne Hilven (nne nne na nna nne Thiago) na Dylano Trossard.
Ọrụ Mama: Onye nwe Pub
Ọrụ Nna: Onye Mmekọ Onye Mmekọ na Josy Comhair.
Bgwọ Brighton: 1,822,800 35,000 (Kwa Afọ) na £ XNUMX (Kwa izu)
Egwuregwu Ọnọdụ: Uwe na Midfield
elu: 1.72 m ma ọ bụ 172cm ma ọ bụ 5 ụkwụ 8 sentimita asatọ.
Onye nnọchi anya: JC Playermanagement-Egwuregwu (nke Josy Comhair nwere)
Dries Mertens Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu